Hoyga - Mytika Speak
Waxaa jira jimicsiyo badan oo olol mataano ah uu midba midka kale ka sameeyo si uu isugu dheellitiro oo u wada koro. Waxyaabaha gaarka ah ee layligan waxaa la siin karaa ...
Sideen ku ogaadaa haddii aan si dhab ah wax u ogaado?
Ma jirtaa hab fudud oo lagu ogaan karo nolosheyda Ray?
Sideen ku ogaan karaa haddii aan la kulmay Runteyda Qofka ama Ego?
Sideen ku noqon karaa boqortooyo?
Sideen ku joojiyaa fiyuus gaagaaban?
Sidee bay ogaanshaha tamartu u noqon kartaa mid xad dhaaf ah?
Sidee tamarta kalsoonidu u noqon kartaa mid xad dhaaf ah?
Sidee bay tamarta xasilloon u noqon kartaa mid daran?
Sidee tamartu u noqon kartaa mid xad dhaaf ah?
Sidee tamarta dhiirrigelintu u noqon kartaa mid xad-dhaaf ah?
Muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya koonka iyo Dunida / Dayaxa / Cadceedda?